Mpanamboatra sy mpamatsy kitapo malefaka tsy vita amin'ny pirinty China IVEN
Azo ampiharina amin'ny 50-5000ml kitapo malefaka tsy PVC ho an'ny vahaolana ankapobeny, vahaolana manokana, vahaolana dialyse, sakafo maha-ray aman-dreny, antibiotika, fanondrahana ary vahaolana famonoana otrikaina sns.
Famahanana sarimihetsika, fanontana
Afaka manome sakafo ho azy ny sarimihetsika amin'ny pirinty sy ny fananganana gara, ny horonan-tsarimihetsika dia raikitra amin'ny fametahana varingarina mora ampiasaina. Ny fametahana dia tsy mila fitaovana sy asa tanana.
Mamelatra sy manokatra sarimihetsika
Ity takelaka ity dia mandray lozisialy misokatra horonantsary. Azo antoka 100% ny fisokafan'ny horonantsary. Ny fomba fanokafana horonantsary hafa dia tsy manana antoka 100%, fa ny rafitra koa sarotra kokoa.
Ny fantsom-bolan'ny peripheral miaraka amin'ny rafitra bobongolo mivelatra bilateraly, ny bobongolo miakatra sy midina dia sokafana miaraka amin'ny takelaka fampangatsiahana, hanafanana ny bobongolo roa mitovy amin'ny mari-pana hatramin'ny 140 ℃ sy ambony. Tsy misy sarimihetsika voaendy mandritra ny fananganana kitapo na ny fijanonan'ny milina. Hatsarao ny kalitaon'ny fantsom-bokatra ary tehirizo ny sarimihetsika bebe kokoa.
Lasitra tombo-kase hafanana voalohany sy faha-2
Noho ny fitaovana sy ny hatevin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny seranan-tsambo sy ny sarimihetsika dia mandray 2 alohan'ny fanafanana, fantsom-paty 2 hafanana ary fantsona mangatsiaka 1, hahafahany mifanaraka amin'ny akora plastika sy horonan-tsary samihafa, mitondra safidy bebe kokoa ho an'ny mpampiasa kalitao avo lenta kokoa, tahan'ny famoahana ambany ao anatin'ny 0.3 ‰.
Ampiasao ny refy fandrefesana be dia be E + H sy ny rafitra famenoana tsindry avo lenta.
Fahamarinana avo lenta, tsy misy kitapo ary tsy misy kitapo mahafeno fepetra, tsy misy famenoana.
Ny ampinga farany amin'ny fantsom-by dia mampiasa fiara fitaterana varingarina samy hafa, ary ny tarika familiana dia miafina ao anaty fotony, mampiasa torolàlana misy fitarihana, tsy misy marika sy sombiny, miantoka ny mari-pahaizana mangarahara amin'ny vokatra.
Ny vokatra vita dia hivoaka amin'ny alàlan'ny fehikibo fampiasa amin'ny fomba manaraka.
1. Ny tsipika famokarana iray dia afaka manamboatra karazana kitapo 2 isan-karazany amin'ny seranana tokana na avo roa heny.
2. Firafitra matevina, habaka fibodoana kely kokoa.
3. PLC, asa mahery, fampisehoana tonga lafatra ary fifehezana manan-tsaina.
4. efijery mikasika amin'ny fiteny maro (Sinoa, Anglisy, Espaniôla, Rosiana sns); ny antontan-kevitra isan-karazany dia azo ahitsy amin'ny welding, fanontana, famenoana, CIP ary SIP toy ny mari-pana, ny fotoana, ny tsindry sns, koa azo soratana arak'izay takiana.
5. Ny fiara lehibe ampiarahin'ny maotera servo ampidirina amin'ny fehikibo synchronous, toerana marina.
6. Fandraisana famehezana tsy ifandraisana mba hisorohana ny fandotoana sy ny famoahana, alao ny rivotra alohan'ny famehezana.
7. Ny metatra mandroso betsaka dia manome famenoana mazava tsara, ny volavola dia azo ovaina mora foana amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny masinina.
8. Fandraisana sy fivoahan'ny rivotra afovoany, tsy fandotoana firy, tabataba ambany, rafitra azo itokisana sy tsara.
9. Mampihetsi-po ny masinina rehefa mihoatra ny efa napetraka ny sandan'ny masontsivana.
10.Ny programa dia afaka mikaroka sy mampiseho ireo teboka tsy mety eo amin'ny efijery mikasika rehefa sendra olana.
11. Fahatsiarovana mahery. Ny valin'ny fametahana sy ny famenoana dia azo tehirizina, rehefa mifindra amin'ny sarimihetsika sy ranoka samihafa, ny masontsivana voatahiry dia azo ampiasaina mivantana tsy hamerina.
12. CIP manokana sy SIP hitehirizana ny fotoana fanadiovana ary hiantohana ny fanamerana ny fanaingoana.
13. Famaritana parameter miaraka amin'ny fiarovan-tena, ny angona dia azo ampiasaina tsotra izao amin'ny efijery mikasika, ny soatoavina farany ambony sy kely indrindra mba hialana amin'ny lesoka artifisialy.
14. Famaritana ny 100/250/500 / 1000ml sns., Mila miova lasitra sy pirinty fanontana fotsiny mba hifamadihana amin'ny specs samy hafa, mora, haingana.
Item Votoatiny lehibe
Fahaiza-mamokatra tena izy 100ML 1000 2200 2200 3200 4000 4000 5500 10000
Loharanon-kery 3 dingana 380V 50Hz
Faneriterena ny rivotra Rivotra maina sy tsy misy solika, 5um ny fahadiovana, mihoatra ny 0.6Mpa ny tsindry. Mampitandrina sy mijanona avy hatrany ny masinina rehefa ambany loatra ny tsindry
Fanjifana an'habakabaka voafintina 1000L / mim 2000L / mim 2200L / mim 2500L / mim 3000L / mim 3800L / mim 4000L / mim 7000L / mim
Fanerena ny rivotra madio Ny tsindry ataon'ny rivotra voadidy madio dia mihoatra ny 0.4Mpa, ny madio dia 0.22um
Fanjifana rivotra madio 500L / min 800L / min 600L / min 900L / min 1000L / min 1000L / min 1200L / min 2000L / min
Fanamafisana ny rano > 0,5kgf / cm2 (50kpa)
Fanjifana rano mangatsiaka 100L / H 300L / H 100L / H 350L / H 500L / H 250L / H 400L / H 800L / H
Fanjifana azota Araka ny fitakian'ny mpanjifa manokana dia afaka mampiasa ny azota isika hiarovana ny milina, ny tsindry dia 0.6Mpa. Ny fanjifana dia latsaky ny 45L / min
Tabataba mihazakazaka <75dB
Fepetra takiana amin'ny efitrano Ny maripanan'ny tontolo iainana dia tokony ≤26 ℃, ny hamandoana: 45% -65%, Max. hamandoana tokony latsaky ny 85%
Haben'ny ankapobeny 3.26x2.0x2.1m 4.72x2.6x2.1m 8x2.97x2.1m 5.52x2.7x2.1m 6.92x2.6x2.1m 11.8x2.97x2.1m 8.97x2.7x2.25m 8.97x4.65x2.25m
Previous: PP tavoahangy IV vahaolana famokarana